Accueil > Gazetin'ny nosy > Ntsay Christian : “Mamingana an-dRajoelina”
Ntsay Christian : “Mamingana an-dRajoelina”
Praiminisitra lehiben’ny governemanta, araka ny voafaritry ny lalampanorenana no nanendren’ny filohampirenena Andry Rajoelina an’i Ntsay Christian. Izy no nofaritan’ny lalampanorenana fa “lehiben’ny fitantanan-draharaham-panjakana” (chef de l’administration). Raha resaka politika indray dia tompon’andraikitra politika (politiquement responsable) eo anoloan’ny Antenimierampirenena ny Governemanta tarihin’ny Praiminisitra.
Hivory tsy ho ela ny Parlemanta, izay ahitana ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona. Basy atifi-kavana ny an’ny solombavambahoaka ka tsy nafeniny fa narangarangany. Solombavambahoaka maromaro avy amin’ny sokajin-kery isan-tokony, IRD, Tsy miankina, Tim, no mitovitovy fomba fijery; raha tafaresaka taminay.
Ny avy amin’ny IRD dia mbola nanipika fa “mbola mitohy ny tsy firaharahian’ny ao anivon’ny governemanta anay depiote, ary ny mampalahelo dia ny Praiminisitra mihitsy no isan’ny tsy manome lanja anay solombavambahoaka”. Tokony hotsaroan’Ingahy Praiminisitra, hoy ny depiote iray hafa avy amin’ny IRD fa izahay depiote maro an’isa no miantoka azy amin’io toerany io ka raha izahay no ataony tsinontsinona dia hahita raha izy satria manana ny fahefana hitsipa-pitokisana ny governemanta tarihiny izahay. Depiote tsy miankina iray hafa indray dia nilaza fa “misy ady mangatsiaka hafahafa eo amin’ny filohampirenena sy ny praiminisitra, raha ny fahitanay azy, ary tsikaritray fa mamingana ny filoha ny praiminisitra sy ny namany”. Isan’ny noraisin’ity depiote tsy miankina ity ho ohatra amin’izany ny sakana nataon’ny Praimini-sitra ka tsy mbola nahafahana nanendry izay ho governoran’ny Faritra Betsiboka hatramin’izao. Renay koa, hoy ihany ity depiote avy amin’ny tsy miankina ity fa “na ny fanendrena tompon’andraiki-panjakana ambony any amin’ireny ministera isan-tokony ireny aza dia noho ny fitsivalanan’ny Praiminisitra Ntsay Christian, izay tsy miseho mivantana fa sarontsaronany ao dia arirarirany.” Ny depiote avy amin’ny Tim kosa dia mazava ny filazan-dry zareo fa “ny filohampirenena no malemy ka tsy mahagaga raha tsy afa-manoatra eo anoloan’ny praiminisitra”.
Dia iaraha-mandinika sy manara-maso eo ny tohin’izany rehetra izany e!